आमाको नामबाट नागरिकता दिन किन नमिल्ने ?
भरतपुर, फागुन २४ । ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिन किन नमिल्ने ? सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट दिने फैसला गरेपछि पनि किन दिइँदैन ?’ भरतपुर महानगरपालिकाले १०८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा एक महिलाले यस्तो गुनासो गरिन् ।
भरतपुर महानगरपालिका कार्यालयले बिहीबार भरतपुरमा ‘महिला अधिकार र चुनौती विषयक’ अन्तरसंवाद कार्यक्रमको आयोजना आयोजना गरेको हो ।
भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महिलाले आमाको नामबाट नागरिकता नपाइएको विषयमा कुरा उठाएका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले समेत आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने घोषणा गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘अब आमाको नामबाट नागरिकता दिन बाधा छैन । बाबुको ठेगान नभएकाहरुलाई बाबुको नाम खाली राखेर नागरिकता दिन मिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेको छ ।’
अन्तरसंवाद कार्यक्रममा महानगरका सबैजसो वडाबाट सयौंको संख्यामा महिलाहरु सहभागी भएका थिए । उनीहरुले आमाको नामबाट महिलाले नागरिकता पाउन नसक्दा उनीहरुका सन्तानसमेत नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको बताएका थिए ।
केही महिलाले बिधवा महिलामात्र नभई विवाह नगरी बसेका महिला र सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेका महिला पनि एकल महिलाको परिभाषाभित्र अट्नु पर्ने बताएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र नहुँदा आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा समस्या रहेको बताए । उनले जनप्रतिनिधिको रोहवरमा उनीहरुले नै जिम्मा लिने गरी नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्दै आएको जानकारी गराएका थिए । माइतीको पहिचान नखुलेका महिलाले नेपालीसँगै बिहे गरेपनि नागरिकता पाउन नसकेकोले यसको लागि कानुन बनाउन आवश्यक भएको उनले बताइन् ।
प्रदेश सांसद गीता वाग्लेले महिला दिवसको कार्यक्रममा पुरुषलाई किन प्रमुख अतिथि बनाएको भनी आपत्ति जनाइन् । कार्यक्रममा समापन मन्तव्य राख्दै भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले महिलाहरुको मुद्दामा खुल्ला बहस चलाउन अन्तरसंवाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको स्पष्ट पारेकी थिइन् । महिला अधिकार प्राप्तिको लडाइँ अहिले पनि जारी रहेको धारणा व्यक्त गर्दै महानगर प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘जति अधिकार उति संघर्ष भनेजस्तै हामीले अधिकार प्राप्तिको लडाइँ अझै जारी राख्नु पर्छ ।’